Vao naharay ny antso ny alatsinainy tamin’ny 3 ora sy sasany tolakandro ny mpitandro filaminana dia nanatanteraka ny fizahana. Hita ary fa fasana vita tamin’ny vato teo Ambohimalazabe an’ny fianakaviana roa tonta no lasibatra ka very tamin’izany ireo taolam-paty, araka ny fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena eo Ankadilalana. Maro amin’ny mpanara-baovao no mihevitra fa entin’ireo olon-dratsy manome hery ireo ody ampiasainy izy ity. Saika ahitana ody gasy sy mohara avokoa ireo dahalo tra-tehaka, raha tsy hilaza afa tsy ireo tra-tehaka tao Analavory farany teo fotsiny, ohatra. Tsy mbola nahitana vokany hatreto ny fanadihadiana azy ireny. Ao ireo maminavina fa fanimbazimbana ny fanomezan-kasina ny razana maha Malagasy fotsiny ireny. Andrasana koa ny fanamarihana ara-tsiantifika fa atao fonona harena saro-bidy izay aondrana an-tsokosoko mba tsy ho hita amin’ny fitarafana izany. Manankarena mpampianatra mpikaroka sy mpanao fanadihadiana lalina i Madagasikara fa mbola mijanona ho mistery hatrany ny trafikana taolam-paty hatramin’izao.